Namni ija takka qabu cirrachaan hin taphatu! – OROMP4 Studio
SABBOONUMMAA: Barruu kaleessaa katabe Osman Abdulatif sagaleetti jijjire. Galatoomi
3.”Sabboonummaan Oromoo saba guddaa xiqqeessitee gandatti deebifte” jedhe Abiy. Kun madaallii dogongoraati. Sabbonummaan Oromoo ganda keessaa baafte malee gandatti hin deebifne. Sabbonummaan Oromoo baroota 1960moota keessa jaaramuun duratti diinni Oromoo ganda gandatti qoodee wal wallaalchisee ture. Har’a daangaa daangatti akka sabaatti walbeekuu bira dabarree kan waliif hadoodnuufi diinnarratti bakka takkaa kaanuuf sababa sabbonummaan cimeefi. Sabboonummaa jechuun ummanni bal’aan tokko osoo ollummaa lafaatifi fira foonii hin ta’in, sadarkaa sammuutti nuti tokko jedhee socho’uu jechuudha. Kanaafuu sabboonummaan Oromoo diinni malkaafi gaaraan qoode tokko godhee, waloon qabsaa’anii salphina keessaa bahanii kabajaa har’aa kana akka goonfatan godhe. Sabbonummaan Oromoo hin xiqqeessine, ni guddise. Gandatti hin deebifne humna itti horeet addunyaatti beeksise.
10. Muumichi Ministeeraa dhugaadha Itoophiyaa guutuu hoggana; saba cufa walqixa tajaajila. Garuu siyaasaa keessatti milkaayuuf hundee ofii jabeeffachuu malee muufachiisuun kasaaraa guddaa qaba ( never loose your base) Itoophiyaa bulchuuf of ta’uu dhiisuun hin barbaachisu. Inumaatuu sabbonummaafi Oromummaa cimaa qabatanii dhaquutu biyya saniifi faaydaa qaba. Ilaalchonni warra kaanii yaalamanii kufanii jiran. Amma dabareen kan Oromummaan yaaluuti.
11. Ilaalchi Abiy kan isaa qofa natti hin fakkaatu. Waanuma akka jaarmaayyi dhiibaa jirantu muldhata. OPDO fi EPRDF dhaabbilee sabummaa irratti jaaramanirraa gara biraatti cehuuf akka yaalaa jiran ni beekna. Kora Hagayya dhufu taa’amurratti EPRDF adda ta’uu irraa gara paartii jijjiramuuf ( from front to party) akka karoorfate Shifarraa Shugguxee dhiheenya kana dubbatee jira. San dura Sibahaat Naggas dubbachaa ture. Ibsa ejjannoo Koreen Jiddu Galeessaa OPDO baase keessattis wanti kun calaqiisee jira. Itoophiyaa keessa cunqursaa gitaa ( class exploitation) malee kan sabaa hin jiru waan jedhu kaayan. Kuni soba qofa osoo hin taane tarsiimoo siyaasaa dogongoraati. Itoophiyaa keessa cunqursaafi loogin sabaa kaleessas ture har’as hammatee itti fufee jira. Hin dogongorinaa! Gara fuulduras sirnuma dimokraatawaa keessattuu siyaasaa biyya akka Itoophiyaa sabummaa irratti kan hundaaye ta’eeti itti fufa. Wayyaaneen yaada kana kan ooftuuf warra ishii waan sirritti diinaggeen humna itti jaarteefi jirtuuf of dhoksuufi. Sabni keenya garuu walqixxummaa fiduuf har’a qofa osoo hin taane borus itti qabsoo itti fufuu qaba. Kanaaf ammoo sabboonummaa isaa laaffisuu osoo hin taane daran cimsachaa deemuun barbaachisaadha.
12. Tooftaa qabsoo amma godhamaa jiru keessa tokko OPDO wayyaanee jalaa bilisoomsuun meeshaa qabsootti jijjiiruudha. Hojii tooftaan tun gaafattu keessaa tokko OPDO keessaa jallaa dhabamsiisuu takka jallisuun, kan jabaa ammoo ajjabeessuudha. Kun caasaa isaanii jalaa hamma gubbaatti itti fufa. Kanaafuu warreen jechaafi gochaanis qabsoo Oromoo faalleessan irratti qabsaa’uun cimee itti fufuu qaba.
13. Muumichi Ministeeraa kun wanti Baahir Daaritti haasaye akka waan dogongora arrabaa ta’eetti warri fudhatan jiru. Miti. Ilaalchuma isaatu sani. Waan kana akeeku akka hudeddutti dubbataa ture. Ilaalchi dogongoraa kan isas saba kanas miidhu waan ta’eef sirreeffachuu qaba! Alagaa gammachiisanii firoomfachuuf saba ofii muufachiisuun kasaaraa siyaasaa qaba. Alagaan hamma fedhe har’a harka siif dhawu bor xiqqoma muufachiifnaan sitti garagala. Kana ammoo torbaanuma dabres agarree jirra. Tarsiimoon sirri saba ofii jabeeffachaa kunuunsaa ormas kabajaan itti dhihaachuudha. Yoo constituency kee jabeeffatte orma birattis kabjaa dhugaafi yeroo dheeraa argatta. Mummichi ministeeraa saboota biyyatti walitti dhiheessuuf akka yaalu naaf gala. Garuu ammoo sabbonummaa Oromoo busheessuufi warra kalee ummata keenya lafarraa duguugaa ture faarsuun tokkummaa inni yaadu san hin fidu; daranuu madaa dur tuttuqee ummata walitti buusa
15. Dhumnarratti Muummichi Ministeeraa kun akka alaa faarfamu kana osoo hin taane mudaa hedduu qaba. ( mudaalee san tarreessuu hin fedhu; jaallan isaa ni beekan garii ammoo duruu mumul’achuu eegalan). Mudaan isaa sun saba keenyaafi biyya san akka hin miine dammaqinaan hordofuu; warri itti dhiyaattan dhugaadhaan gorsuu, nuti warri irraa fagoo ammoo cimsinee qeequun barbaachisaadha. Warri itti dhiyaatu osoo beekanii caldhisanii faarsinaan, nuti warri fagoos mirqaana yeroo cabsuu diddaaf afaan qabannaan walfudhannee qilee dhaqna.